Tatoazy manerana ny vatana, fanontaniana sy valiny amin'ireto sombin-javatra marobe ireto! | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy manerana ny vatana, fanontaniana sy valiny amin'ireto sombin-javatra marobe ireto!
Tatoazy manerana ny vatana miavaka amin'ny fibodoana ny vatana iray manontolo, araka ny tondroin'ilay anarana. Fantatra amin'ny teny anglisy amin'ny akanjo fitondra amin'ny vatana izy ireo tombokavatsa tsy mamela olona tsy hiraharaha izany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ity karazana tatoazy ity sy amin'ny antsipiriany bebe kokoa isika. Vakio hatrany raha mikasa ny hahazo iray ianao!
1 Inona no atao hoe tatoazy feno?
2 Manana faritra manerana ny vatana ve ny tombokavatsa?
3 Inona no ifandraisan'izy ireo amin'ny irezumi?
4 Maharary ve ny tatoazy manerana ny vatana?
5 Maharitra hafiriana ny fizotrany?
6 Ohatrinona ny sarany?
7 Manana fifandraisana ve ny tatoazy manarona ny vatana iray manontolo?
Inona no atao hoe tatoazy feno?
Azontsika an-tsaina izany, Ny tatoazy amin'ny vatana iray manontolo, araka ny anarany, dia tatoazy manarona ampahany lehibe amin'ny hodintsika. Ireo tatoazy ireo dia mandrakotra ny torso iray manontolo (na ny lamosina manontolo) na ny vatana iray manontolo, ary na dia tsy izany foana no izy, dia azo inoana fa manana lohahevitra mifandraika sy mivelatra izy ireo raha toa ka natao hohaingoina.
Manana faritra manerana ny vatana ve ny tombokavatsa?
Ny ampahany amin'ity karazana tatoazy ity dia heverina ho faritra vita amin'ny tatoazy amin'ny toerana sasany amin'ny vatana. Ho setrin'izany, ireo sombin-javatra ireo dia azo tombokavatsa tsy miankina amin'ny vatana sisa, na koa ampiarahina (mifanaraka amin'ny foto-kevitra na ara-bakiteny) amin'ny tatoazy taty aoriana. Ireto misy toy izao:
Tanana feno: Tatoazy vita amin'ny tanany feno izay manarona ny sandry iray manontolo, manomboka amin'ny soroka ka hatramin'ny fehin-tanana. Tanan-tànana antsasaky ny lafiny iray, manarona hatrany an-tsoroka ka hatrany amin'ny kiho.
Ampahany: Manarona ny lamosina iray manontolo, manomboka amin'ny soroka ka hatramin'ny valahana, indraindray ao koa ny vodin-trondro.
Tatoazy amin'ny tongony: Tsy toy ireo roa teo aloha, ny a dia manana teny manokana mamaritra azy. Izy ireo dia mety ho tongotra feno na antsasaky ny tongotra (toy ny karazana pataloha fohy).
Mazava ho azy, misy faritra hafa izay azo raisina ho toy ny ampahany amin'ny akanjo lava, saingy tsy dia manapa-kevitra toy ny teo aloha, toy ny loha, tanana, tongotra ...
Inona no ifandraisan'izy ireo amin'ny irezumi?
Niresaka momba ny irezumi, zavakanto Japoney manao tatoazy isika, amin'ny fotoana hafa. Ny tatoazy amin'ny vatana dia mifamatotra tsara amin'ity fomba ity, toy ny Any Japon nentin-drazana ity karazana tatoazy ity dia manana ny fitsipiny manokana momba ny toerana.
Tahaka ny fizarana ny lamosina manontolo amin'ny tombokavatsa feno vatana tandrefana, any Japon dia misy maodelin'ity karazana tatoazy ity:
Donburi Sōshinbori (総 身 彫 り): Izy io dia ny tatoazy feno vatana tsy misy misokatra.
Munewari Sōshinbori (胸 割 り 総 身 彫 り): Izy io dia ny tatoazy feno vatana miaraka amin'ny fisokafan'ny tratra.
Munewari (胸 割 り): tatoazy eo amin'ny tratra fa misy fisokafana eo afovoany.
Nagasode (長袖): tatoazy manarona ny sandry iray manontolo.
Shichibu (七分): ara-bakiteny 'faritra 7', tatoazy izay manarona hatramin'ny soroka ka hatrany afovoan'ny felatanana.
Gobu (五分): ara-bakiteny hoe 'faritra 5', ny tatoazy dia hatramin'ny eloka ka hatramin'ny soroka.
Hanzubon (半 ズ ボ ン): Izy io dia ilay manarona ny tongotra hatramin'ny lohalika, miaraka amin'ny tombokavatsa amin'ny faritra anatiny amin'ny tongotra.
Maharary ve ny tatoazy manerana ny vatana?
Mazava ho azy, miankina amin'ny toerana hanaovanao tatoazy mandritra io fivoriana io. Ireo toerana toa ny lamosinao, ny tananao na ny tongotrao dia tsy dia maratra, fa ny andro ahazoanao tombokavatsa taolan-tehezana dia hidina any amin'ny helo.
Maharitra hafiriana ny fizotrany?
ara-dalàna ny tombokavatsa be toy izany dia matetika tsy atao tatoazy amin'ny andro iray ihany. Tsy herisetra ho anao fotsiny izany (na dia miaritra ny fanaintainana aza ianao, ny fahaverezan-dra, ny adrenalinina ary ny fanjaitra mandalo ny hoditra ka mamela anao ho vovoka hatrany), fa ho an'ny mpanao tatoazy koa tsy azo eritreretina afaka mihazona ny fifantohana rehetra sy ny endrika ara-batana amin'ny sombin-javatra lehibe toy izany.
Tsy miresaka andro isika, tsy miresaka momba ny volana akory. Un palitao vatana Afaka maharitra taona maro vao vita (eo amin'ny roa na telo eo ho eo) satria mila mandamina tsara izany amin'ny mpanao tatoazy ianao, miaraha aminy mandritra ny fotoana ary avelao ny hoditra hiverina alohan'ny hiverenany amin'ny entana.
Azontsika atao ny manampy ny vola vola amin'ny laharam-potoana. Ny tatoazy amin'ny vatana dia tsy mora velivelyAmin'ny salan'isa dia 50.000 42.600 $ eo ho eo ny vidiny (eo amin'ny XNUMX XNUMX euro eo ho eo).
Manana fifandraisana ve ny tatoazy manarona ny vatana iray manontolo?
Ho fanampin'ny tatoazy nentim-paharazana Japoney, Any Andrefana, ny tatoazy izay manarona ny vatana iray manontolo dia misy ifandraisany amin'ny fampisehoana «cirque» fampisehoana hafahafa Vahoaka amerikana (ireo izay nahitana vehivavy be volombava, lehilahy matanjaka ary "natiora hafa"). Tsotra ny antony: ny olona voalohany nanana tatoazy manerana ny vatany dia niasa tamin'ny fampisehoana an'io karazana io, mampiseho an'izao tontolo izao ny hoditr'izy ireo tatoazy.
Iray amin'ireo voalohany nahazo tombokavatsa amin'ny vatana manontolo i The Great Omi, izay taorian'ny Ady lehibe voalohany dia nanapa-kevitra ny hivelona toy izao, na dia misy maro hafa, toa an'i George Costentenus, izay nisafidy io làlana io noho ny fiantsoana na ny filàna ilaina.
Raha ny marina, Na dia amin'izao fotoana izao aza dia afaka mahita mpanakanto mampiasa ny vatany tatoazy manontolo isika ho fitakiana amin'ny seho an-tsehatra ataon'izy ireo na amin'ny fanehoana azy manokana.Ohatra, Lizardman (miaraka amin'ny tombokavatsa sy fanovana ny vatana hitovizany amin'ny androngo), Enigma (miaraka amin'ny vatany feno fonosana piozila) na Tom Leppard (izay rakotra leoparda ny vatany). Na izany aza, tokony holazaina fa ny tatoazy amin'ny vatana iray manontolo, amin'ireto tranga ireto, dia naka lalana hafa, satria matetika izy ireo dia manisy fanovana amin'ny vatana mihoapampana.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra amin'ny tatoazy amin'ny vatana iray manontolo ity dia nampiala voly sy nahaliana anao. Lazao aminay, inona ny hevitrao momba ireo tombokavatsa ireo? Manana akanjo marobe toy izany ve ianao? Lazao anay izay tadiavinao amin'ireo hevitra ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy manerana ny vatana, fanontaniana sy valiny amin'ireto sombin-javatra marobe ireto!
Tatoazy fanaovana sonia Libra
Tatoazy Pentagram, mozika amin'ny hoditrao